नमस्कार रबिन्द्र खड्का ज्यु !
हाम्रो जवानाको चलचित्रको नायक हो तपाईँ । त्यसबेला ठुलो पर्दाको नायकको रूपमा चर्चित हुँदा हामी काभ्रे जिल्लावासीले पनि गौरव गरेका थियौ । कलाकार भनेको सबैको प्यारो हुन्छन् । जिल्लावासी भएकोले रबिन्द्र खड्का हाम्रो छिमेकी दाई, काका भनेर कतिलाई भन्यौ, चिनायौ । मायाप्रितीबाट उदाएको कलाकार समय परिवेशसँगै अस्ताउने तरखरमा हुनुहुन्छ । नेपाली फिल्म जगतमा एकताका निकै चर्चा चलेर समयक्रममा ओझेलमा पर्नुभयो । हामीले पनि दशकौ वर्षहरुमा हलमा गएर नेपाली फिल्म हेरेनौ त्यसैले होला नेपालमा धेरै हलहरु बन्द भए । बनेपाको मयुर हल पनौतीको श्री राम हल गोदाममा परिणत भए अहिले श्रीराम पार्टी प्यालेसको रूपमा चल्दैछ । समयको बहाव सँगै तपाईँ पनि रगमञ्च सँगै राजनीतिमा लाग्नु भयो । राप्रपाबाट चुनाव पनि लड्नु भयो । जिल्ला एउटै चुनाव क्षेत्र भएर पनि भोट माग्न आउँदा समेत तपाईँ सँग भेट भएन । हामी सँगै बसेर कुरा गर्न पाएका छैनौ । अहिले इन्टरनेटको जमाना विश्वको कुनै पनि भू–भागमा रहेर पनि सँगै बसेको आभास पाउन सक्छौ त्यसैले तपाईँ रबिन्द्र खड्काले राप्रपा पार्टी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरको देखियो किन र के को लागी ? यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा पनि प्रत्रिका मार्फत खुला पत्रमा व्यक्त गर्न मन लाग्यो ।
राजनीतिमा सिद्धान्तले गर्दा नै भिन्न भिन्न बिचार समूहको मानिसले गर्दा फरक फरक पार्टीहरू बन्ने हुन । आज नेपालमा विभिन्न सिद्धान्त बोकेका वर्ग शत्रुहरु पनि राजनीतिक सत्ता चलखेलका लागी एक भएका छन् । राजनीतिमा इमान जमान हुदैन । नेताहरू स्वार्थको लागी कुनै ईख र रिस राक्दैनन् । पद र सत्ताको लागी सबै बिर्सन्छन् । हामी जनताहरू भने आफ्नै दाजु भाइ इष्टमित्रमा पानी बाराबर चिहान अलग अलग गर्ने गरेका छौ किन र के का लागी ? हामी नेपाली जनताहरुले बुझ्न नसकेका कुराहरू हो यो । तपाईँ कलाकार त्यसैले तपाईका शुभ चिन्तक दर्शकहरु जान्न चाहन्छन् । तपाईँको राजनीतिक धारणा के हो ? आजकाल एक पार्टीबाट अर्को पार्टी छिर्ने लहर चलिरहेको छ । कुनै व्यक्ति पार्टी सँग कुनै सरोकार छैन । कुहेको प्याज आलुमा मिसिन सक्छ । एउटा कुहेको आलुले सिङ्गो बोराको आलु कुहिन सक्छ तर कसैलाई केही मतलब छैन । एक ताका चलेको नारा “जनजातीको नारा किन ? छुवाछुत र बिसंगती कु–संस्कार हटाउन “यो भित्री राजनीति चलखेल जनताहरुले बुझेनन् त्यसैले राजनीतिक चलखेलमा हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य बनायो आज शेर बहादुर देउवाले धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्षको जेल सजाय हुने कानुन ल्याउदै छ रे हामी सोझा जनताहरुले यी कुरा कसरी बुझ्ने ? रबिन्द्र जी तपाईँ अब एमालेमा छिर्नु भयो । अहिले एमालेमा के पी ओलीको राज छ । तपाईँ कलाकार केपी ओलीको खैजडीको भाकाको गीतमा,
हेर मेरा साथी हो, नाचौ गाऔ रमाइलो, भोट हालौ सूर्यमा ... ।
माधव नेपाल गई हाले, झलनाथ गई हाले, केपी ओली जिन्दाबाद !
हो कि होइन ? हो हो हो, हे रामा रामा राम राम.....
अब खुट्टा मर्काई मर्काई नाच्नु हुन्छ की ?
तपाईँ स्वतन्त्र हो । जुन सुकै पार्टीमा छिर्न सक्नु हुन्छ तर कुनै पार्टीको झोले भएर नछिर्नु होस् । सत्य र ठिक कुरालाई साथ दिनु होस् । चितवनको देवी ज्ञवालीले पार्टीको नीति भनेर आउँदो चुनावमा प्रचण्ड जिताउन भोट मागी हिड्ने भन्दा जनताहरुले के बुझ्ने ? नेताहरूको नाटकलाई कसरी हेर्ने ? तपाईँ कलाकार सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो भनेर बोल्न सक्नु पर्छ । लेखकले लेख्नु पर्छ । पत्रिकाले छाप्नु पर्छ । अझै पनि यो देशमा केही सत्य बाँचेको छ त्यसैले पनि यो देश चलेको छ । जुन सुकै पार्टी भित्र पनि सत्यलाई साथ दिने विवेकशील व्यक्ति हुनु पर्दछ । सबै व्यक्ति स्वार्थमा लिप्त हुँदैनन् । तपाईँ प्रेममा असफल भएर मायाप्रितीको त्यो गीत हामीले बिर्सेका छैनौ । तपाईँलाई चिनाउन घोडा चढे लडिन्छ है अहँ म चर्दिनँ भन्ने गीत राजनीतिमा पनि असफल भएर यसरी गाउने हो की !
सयौं पार्टीे नेपालमा, देशमा बिकास भएन ।
सुन्दर शान्त देश हाम्रो अब........... भएन ।
सूर्य उदाएर उज्यालो भयो, अहँ म मान्दिनँ ।
उज्यालो त हाम्रै पार्टी रा.प्र.पा.मा. ..... छ ।
घोडा चढे लडिन्छ है अहँ म चढ्दिन !
कल्पनामा कति कति चढि सक्या छु !
चुनाव आयो धाँधली भयो, मलाई टिकट दिएन ।
कल्ले बल्ले कल्ले छेक्यो, मेरो हिड्ने बाटोमा ...
पाईलाहरु लरबराउछ कता टेकु म !